यस्ता पार्टनर, भएका मानिस भाग्यमानी हुन्छन - ज्ञानविज्ञान
पार्टनरको अनुहार सधै हँसिलो होस्, खसी होस् भन्ने चाह राख्ने पति/पत्नीलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । यस्ता पति/पत्नी पार्टनरको खुसीमा आफ्नो खुसी खोज्छन् ।
पार्टनरको सुखमा आफु आनन्दाभूत गर्छन् । त्यतीमात्र होइन, पार्टनर के कुरामा खुसी हुन्छन्, के कुरामा रमाउँछन् त्यस्तै वातावरण बनाउने प्रयास गर्छन् ।
यद्यपी पति/पत्नी जो आफ्नो पार्टनरप्रति सकारात्मक भाव राख्छन् । पार्टनरको भावनालाई सम्मान गर्छन् । पार्टनरले बोलेको, भनेको, सोचेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिन्छन् । यस्ता पति/पत्नीले आफ्ना पार्टनरलाई माया गर्छ ।
अक्सर पति घरबाहिरको काम गर्ने, पत्नीले घरधन्दाको काम गर्ने पारिवारिक संरचना छ हामीकहाँ । घरधन्दाको काम गर्ने, बच्चा हेर्ने, खानपिन पकाउने जस्ता काम पत्नीको जिम्मामा लगाइन्छ ।
घर बाहिरको काममा पतिलाई अगाडि सारिन्छ । यस्तो अवस्थामा पति/पत्नीले आफ्नो पार्टनरको काम साझेदार गर्छन् भने उनमा अधिक माया हुन्छ ।
पति वा पत्नीमध्ये कसले, कसको बढी सामिप्यता खोज्छ ? यसले पनि उनीहरुको मनोभाव बुझ्न सकिन्छ । जसले आफ्नो पार्टनर नजिक हुँदा बढी आनन्दित महसुष गर्छ, जो आफ्नो पार्टनरसँग अनेक वहानाले नजिकिन खोज्छ ।
स्पर्श गर्न चाहन्छ । पक्कैपनि उनीहरुमा पार्टनरप्रति बढी माया हुन्छ । उनीहरु बिहे, भोजमा होस् वा घुमघाममा, सिनेमा हेर्न होस् वा पारिवारिक जमघटमा आफ्ना पार्टनरको उपस्थिती खोज्छन् । पार्टनरको अनुपस्थितीमा खल्लो अनुभव गर्छन् ।
यस्ता पति/पत्नीले आफ्ना पार्टनरको स्वास्थ्य अवस्था के छ, दिनभर के खायो, के खाएन, औषधीको छुट्यो कि भन्नेसम्मका ख्याल राख्ने गर्छन् ।
त्यतीमात्र होइन, पार्टनरले लगाएको लुगा ठिक छ/छैन, गरेको काम सही छ/छैन भन्नेसम्ममा चासो राख्छन् । पार्टनरलाई जाडो भएको, भोकाएको, थाकेको सबै अवस्थाबारे बुझ्न खोज्ने पति/पत्नी मायालु हुन्छन् ।
Topics #मानिस भाग्यमानी
Don't Miss it जाडोमा हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ, यसलाई बढाउनका लागि केहि प्राकृतिक विधी यस्ता छन्
Up Next कान बहिरोपनको लक्षणबारे जान्नुनुहोस
के गर्नुहुन्छ तनाव कम गर्न ?
अध्ययनमा भनिएको यदि पुरुषलाई कामको समयमा केही समस्या भएमा थेरापी सबैभन्दा उत्तम बिकल्प हुन सक्दछ । महिलाहरुको सम्बन्धमा भएको तनाव…
यी हुन् हर्ट अट्याकबाट बच्ने उपाय
अर्को कुरा अहिले बजारमा बढ्दै गएको जंकफुड नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । जंकफुड मुटुरोगको अर्को कारण हो…